(င)-ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့(၂၅)ခုတင်ဆံ့ဆေးရုံ၌ ဆရာဝန်(၁)ဦး တိုးမြှင့်ခန့်ထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
(င)-ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့(၂၅)ခုတင်ဆံ့ဆေးရုံ၌ ဆရာဝန်(၁)ဦး တိုးမြှင့်ခန့်ထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၁၇. ၅. ၂၀၁၉)
ဦးစောတင်ဝင်း( ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မဲဆန္ဒနယ်)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့ရှိ ၂၅ ခုတင်ဆံ့ ဆေးရုံတွင် ယနေ့တိုင်အောင် ဆရာဝန်တစ်ဦးသာ ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့သည် နယ်စပ်မြို့ ဖြစ်ပြီး ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့် မိုင် ၆၀ ကျော်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်နှင့် မိုင် ၇၀ ကျော်ဝေးကွာသည့် မြို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် တစ်ဦးတည်းသော ဆရာဝန်သည် တစ်ခါတစ်ရံ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ယူသည့်အခါ ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်မရှိခြင်းကြောင့် ထိုအချိန်၌ အရေးပေါ်လူနာ ရောက်ရှိလာပါက အနီးဆုံး မိုင် ၆၀ ကျော် ဝေးကွာသော ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ကို သွားရောက်ရပါကြောင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပြီး လူသေမှုဖြစ်သည့်အခါ အဆိုပါလူသေအလောင်းကြီးကို ဆရာဝန်ဆေးစစ်ချက် ရရန်အတွက် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့အထိ သယ်ဆောင်သွားရပါကြောင်း၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့သည် ယခုအခါ လူဦးရေများပြားလာသည်က တစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဘုရားသုံးဆူဆေးရုံသို့ အတွင်းလူနာ တစ်ထောင်ကျော်၊ ပြင်ပလူနာ ကိုးထောင်ကျော်၊ မွေးလူနာ ၂၅၆ ဦး၊ ခွဲစိတ်လူနာ ၃၁ ဦးတို့ တက်ရောက်ကုသ နေပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဘုရားသုံးဆူမြို့ (၂၅) ခုတင်ဆံ့ ဆေးရုံသို့ ဆရာဝန်တစ်ဦး တိုးမြှင့်ချထားပေးပါရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
တစ်ပြည်လုံးတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံသည် ၁၆ ခုတင်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါဆေးရုံတွင် ၂၅ ခုတင် ဖြစ်သည့်အပြင် ထူးခြားစွာ ဆရာဝန် ၂၃ ဦး ရှိရမည်ဟု ယခင်ခေတ် Cabinet က Approved ထားပါကြောင်း၊ တစ်ပြည်လုံးတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလင်းမြို့နယ်၊ ဆင်ဖြူကျွန်းတွင် တစ်ခု၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူတွင် တစ်ခု၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ မြတောင်မြို့နယ်တွင် ၂၅ ခုတင် ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ၂၅ ခုတင်သုံးခုသည် ထူးခြားစွာဆရာဝန် ၂၃ ဦး ရှိသည်ဟု Approved လုပ်ထားသည်မှာ မဖြစ်သင့်ပါကြောင်း၊ ၂၅ ခုတင်တွင် ဆရာဝန်အားလုံး အလွန်ဆုံး ခြောက်ဦးသာရှိရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို ပြန်တင်ပြီး လျှော့ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆေးရုံသုံးရုံ ၂၅ ခုတင်က ခုတင် ၅၀ ထက် ဆရာဝန်များ နေသည်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူ၏ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ ဆေးရုံအတွင်း လူနာဦးရေ (Average number of inpatient) Per Day ကို ကြည့်သည့်အခါ ကိုးယောက်၊ ၁၅ ယောက်၊ ၁၇ ယောက်၊ ၁၄ ယောက်၊ ၁၂ ယောက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ နည်းပါးပါကြောင်း၊ ဆေးရုံအသုံးပြုခုတင် (Bed Occupancy Rate) သည်လည်း ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၈၈၊ ၆၅၊ ၅၄၊ ၄၄ သာ ရှိပါကြောင်း၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင် စုစုပေါင်း ၇၇၇ ရုံ ခန့် ရှိပြီး ၄၈၃ ရုံတွင်သာ ဆရာဝန်ကိုသတ်မှတ် ခန့်ထားပါကြောင်း၊ ကျန်တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် Re-leading တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်က ဆက်ပြီးလုပ်ရပါကြောင်း၊ မကြာမီတွင် ဆရာဝန် ၉၆၇ ယောက် ခေါ်ရန် ရှိပါကြောင်း၊ Experience ရှိသည့် ဆရာဝန်များ လှည့်လည်လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ထောက်ဆရာဝန် အနေဖြင့် ခွင့်ပြုအင်အားထက် ၃၇၊ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေရ ပါကြောင်း၊ ဆေးရုံ ၇၇၇ ရုံတွင် ၄၃၀ ရုံကျော်သာ ရှိသည့်အတွက် ၁၈၁ ရုံတွင် Permanent ဆရာဝန်ခန့်ထား၍ မရသေး သော်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီး တင်ပြသည့်အတိုင်း ဆရာဝန်ခွင့်ခံစားသည့် အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ သင်တန်းများတက်ရောက်သည့် အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သည့် အချိန်တွင်လည်းကောင်း ဆရာဝန်လစ်ဟင်းမှု မရှိရန် ကရင်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးကို အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိုင် ၆၀ ခန့်ကွာဝေးပြီး နောက်တစ်နေရာ သွားမည်ဆိုပါက အမြဲတမ်းတစ်ယောက်ရှိရန် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းခံသည့်နေရာ များစွာရှိသည့်အတွက် ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခုကို Holistic Review အားလုံး လုပ်ခိုင်းပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သည့်နေရာကို ဆရာဝန်များ ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများလည်း နည်းပါး သွားမည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊ ဆရာဝန်လစ်လပ်မှုမရှိရန် Re Leading လုံးဝပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။